प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम, अब सिक्नुहोस्! 🥇 अनलाइन अनुयायीहरू
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम, अब सिक्नुहोस्!
फेब्रुअरी 14, 2019
संचार को आवश्यकता को विकास संग पार गरेको छ नयाँ प्रविधिहरू। यही कारणले सोशल नेटवर्कको उदयले ठूलो स number्ख्यामा ठूलो स्वरले सन्तुष्टि ल्यायो। विश्व जनसंख्या द्वारा सबैभन्दा प्रशंसित प्लेटफर्म मध्ये एक इन्स्टाग्राम हो। यो फोटोग्राफहरूको प्रकाशनमा आधारित छ जुन तपाईंलाई रमाईलो लागेको छ र साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ। जे होस्, अपडेटमा ल्याईएको इन्टरफेस पावरमा थपियो निजी सन्देशहरू पठाउनुहोस्। यस तरिकाबाट, प्रयोगकर्ताहरू दूर संचार भएमा सञ्चारमा हुन सक्छन्। यसैले सिधा इन्स्टाग्रामलाई हालको मितिको रूपमा अनुरोध गरिएको छ।
एक नवीन सामाजिक नेटवर्कमा इन्स्टाग्राम जुन पहिले नै ल्याउँदछ 10 बजारमा बर्ष। यो यसको सहज र आकर्षक इन्टरफेसको लागि परिचित छ जहाँ प्रयोगकर्ताले मल्टिमेडिया सामग्री मार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यस्तो सामग्री हुन सक्छ छवि वा छोटो भिडियो जुन सम्पादन र उत्कृष्ट अवलोकनको लागि सुधार गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, प्रशंसित नेटवर्कले आफ्नै लागि उपकरणहरूको दायरा सिर्जना गरेको छ जसले यसलाई प्रयोगकर्ताको बढ्दो इच्छा गर्दछ।
इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष सन्देशहरू एक हुन् धेरै महत्त्वपूर्ण उपकरण अनुप्रयोग द्वारा विकसित। यस संयन्त्रको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूले सन्देश पठाउन नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्दछन् जानकारी र मल्टिमेडिया सामग्री नेटवर्कमा अन्य व्यक्तिहरूलाई। मल्टिमेडिया सामग्री भने फोटोग्राफिक सामग्री वा एक मिनेट को अवधि को छोटो भिडियो मा आधारित हुन सक्छ।
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्रामको प्रयोगले साझेदारीलाई अनुमति दिनुपर्दछ निजी जानकारी प्रयोगकर्ताहरू बीच तपाईं प्रकाशित सामग्री साझा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं अर्को व्यक्ति द्वारा अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ। प्लेटफर्म मार्फत सन्देशहरू उनीहरूको स्थिर अपडेट र एक ठूलो तरिकामा रचनात्मकताको सम्भावनाको माध्यमबाट एक हलचल पैदा भएको छ। वास्तवमा, भर्खरको अपडेटहरूमा यो सम्भव पनि छ कथाहरू पठाउनुहोस् दुई विचारहरूको सीमाको साथ।
किन प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ?
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम प्रयोगको कारण विविध छन्। केही प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई उनीहरूको लागि प्रयोग गर्दछन् द्रुत रूपमा र आरामको लागि अन्य। के पुष्टि भयो त्यो हो उच्च दक्षता अनुक्रमणिकादेखि, प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम को माध्यम बाट आगमन निश्चितता अपराजेय छ।
त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले यो माध्यम प्रयोग गर्छन् जानकारी साझा गर्नुहोस् वा अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी स्थापना गर्नुहोस्। यो सक्षम हुनु अनुप्रयोगको सहज इन्टरफेसको कारणले हो सन्देशहरू पठाउनुहोस्। यसको सरल र सजिलो ईन्टरफेस आकर्षणको यसको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो।
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम सन्देशहरूको प्रयोगको माध्यमबाट तिनीहरूको उत्कृष्ट सत्यताको पुष्टि गर्न सम्भव छ। यो निस्सन्देह प्रभावकारी छ सन्देशहरू पठाउनुहोस् अनुप्रयोग मार्फत, किनकि तपाईं आगमनको निश्चित हुन सक्नुहुन्छ Mensaje इच्छित प्रयोगकर्तालाई। कुनै बाह्य कारकहरू हुनेछैनन् जसले सन्देशको आगमन र प्रस्थानलाई नेटवर्कमा जडान बाहिर रोक्न सक्दछ वाइफाइ वा मोबाइल डाटा।
डायरेक्ट इन्स्टाग्रामको पठाईएको ए द्रुत गति जसले यसलाई अविश्वसनीय आकर्षक बनाउँछ। एक पटक प्रयोगकर्ताले आइकनमा क्लिक गरेपछि पठाउनुहोस् सीधा सन्देश, यो स्वचालित रूपमा रिसीभरमा पुग्नेछ। उत्तरार्द्धले यसलाई अवलोकन गर्न र प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम मार्फत सम्बन्धित प्रतिक्रिया पठाउन सक्षम हुनुपर्दछ।
डायरेक्ट इन्स्टाग्रामको सब भन्दा आकर्षक अंश माध्यमको माध्यमबाट पठाउन सकिने सामग्रीको विविधतामा निहित छ। यो उपयोगी उपकरणले अनुमति दिन्छ envío पाठहरु को निजी वा सार्वजनिक महत्त्वको; यद्यपि बिभिन्न मल्टिमेडिया ढाँचाको सामग्री। यी स्वरूपहरूमा पावर फेला पर्नेछ तस्विर वा फोटोहरू साझा गर्नुहोस्, साथै छोटो भिडियोहरू। यस तरीकाले इच्छित व्यक्तिसँग एक खास क्षण साझेदारी गर्न सम्भव हुनेछ। थपमा हालसालैका एक अपडेटले पठाउन अनुमति दिन्छ सार्वजनिक कथाहरू वा केवल अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग निजी उपभोगको लागि।
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्रामको एक विशेष सुविधा यसमा रहेको छ प्रदर्शन पुष्टिकरण जबबाट, जब सन्देश पठाइन्छ र प्राप्त हुन्छ, प्लेटफर्मले एम्सिसेरीलाई सूचित गर्नुपर्दछ, सन्देश अन्तर्गत आइकन मार्फत, कहिले सामग्री प्रदर्शित गरिएको छ। यस तरीकाबाट, व्यक्तिले थाहा पाउनुपर्दछ कि उसको सन्देश कहिले पढियो वा देखियो, र हो कि उसले जानाजानी प्रतिक्रिया दिने निर्णय गरेको छ।
कसरी एक प्रत्यक्ष इंस्टाग्राम पठाउने?
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम पठाउनको प्रक्रिया अत्यन्तै छ सरल र सजीलो पहुँचयोग्य। एक पटक अनुप्रयोग प्रविष्ट गरे पछि प्रयोगकर्ताले केवल एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्नेछ साधारण चरणहरूको।
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम पठाउनको लागि, प्रयोगकर्ताले पहुँच गर्न आवश्यक छ सन्देश ट्रे यो गर्नका लागि तपाईले माथिल्लो दायाँ कुनामा पेपर प्लेन आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ गृह स्क्रिन अनुप्रयोग को। यस तरिकाले तपाईंसँग पहिल्यै पठाईएको र प्राप्त सन्देशहरूमा पहुँच हुनेछ।
जब सन्देश बाकस पहिले नै पहुँच गरिएको छ, तपाईंले ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्नेछ "नयाँ सन्देश।" यस तरिकाले तपाईं प्राप्तकर्तालाई सन्देश लेख्न सक्नुहुनेछ जसको साथ तपाईंले कहिले कुराकानी सुरु गर्नुभएको छैन। यो गर्नका लागि तपाईले राख्नु पर्छ उपनाम वा प्रापकको प्रयोगकर्ता नाम जसलाई तपाईं सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ। वा असफल, तपाईं मध्ये एउटा चयन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ पुरानो कुराकानी, यदि तपाईंले अनुप्रयोगको बारेमा अन्य प्रयोगकर्तासँग कुरा गरिसक्नुभएको छ भने।
मानक पत्र वा सन्देशको रूपमा तपाईले पठाउन चाहानुभएको जानकारी लेख्नुपर्दछ। प्रयोग गर्न सुझाव दिइदै स्पष्ट र सहि सन्देश तपाइँको उत्तम कम्प्रेसनको लागि। एकै तरीकाले तपाईं मल्टिमेडिया सामग्री चयन गर्न सक्नुहुन्छ पठाउन यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। एक चोटि यो काम सकिसकेपछि तपाईले क्लिक गर्नुपर्नेछ "पठाउनुहोस्" र कार्य पूरा गर्नेछ
डाउनलोड गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम कथाहरू आईफोन
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम पीसी, यसलाई नहेर्नुहोस्!